Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Nọmba 10 -> Ihe ngosi mgbakọ na mwepu
Ihe ngosi mgbakọ na mwepu: [Nọmba 10]
Mgbe ha kpọgidechara ha nꞌelu obe, Jisọs kwuru okwu sị, “Nna, gbaghara ha nꞌihi na ha aghọtaghị ihe ha na-eme.” Ndị agha kere uwe ya nꞌetiti onwe ha. Ha fere nza ịchọpụta onye ga-ewe nke ọ ga-ewe.
“Ajụjụ a dịrị unu bụ nna nwere ụmụ. Onye nꞌime unu ka nwa ya ga-abịakwute ka o nye ya beredi, o were nkume nye ya?
Jọn nꞌonwe ya abụghị ìhè ahụ. Ọ bụ nanị onye gbara ama kọwaakwa ihe banyere ìhè ahụ.